मनोरन्जन Archives - पब्लिक पाेष्ट
August 3, 2020 August 3, 2020 EP EDITORLeaveaComment on विश्वकै कान्छी प्रधानमन्त्री सन्ना मरिनले गरिन् विवाह
विश्वकै कान्छी प्रधानमन्त्री सन्ना मरिनले लामो समयको प्रेम सम्बन्धपछि विवाह गरेकी छिन्। फिनल्यान्डकी प्रधानमन्त्री मरिनले १६ वर्षको प्रेम सम्बन्धपछि पूर्व फुटबलर मार्कुस राएकोनेनसँग विवाह गरेकी हुन्। मरिनको विवाहमा ४० जना पाहुना मात्र उपस्थित थिए। ३४ वर्षकी मरिन र मार्कुसका २ वर्षकी छोरी छिन्। उनको नाम एमा अमालिया मरिन हो। गत वर्षको डिसेम्बरमा मात्र मरिन प्रधानमन्त्री […]
September 24, 2019 EP EDITORLeaveaComment on रामचन्द्र र सागरको दशैं -तिहार खुराक ‘लाहुरे आयो’ (हेर्नुहोस् भिडियो सहित)
काठमाडौ । रामचन्द्र चन्द र सागर पन्थको बील्कुलै फरक खालको नँया दशैं तिहार गीत लाहुरे आयो सार्बजनीक भएको छ । रोजगारको शीलशीलामा आफ्नो जन्मथलो छोडेर परदेशीएका सम्पुर्ण नेपाली र आफन्तजनको दुख बीर्साउने र दशैं तिहारमा सबैजना जम्मा भएर रमाईलो गर्दै नाच्दै नचाउँदै सबैमा समान र सद्भाबको भावना फैलाउँदै चाडबाडमा रमाईलो गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश गीतमा दीईएको […]
संचारकर्मी सिर्जना थापाको तीज गीत केल्ले मलाई सुहायो…( भिडियोसहित )
August 5, 2019 EP EDITORLeaveaComment on संचारकर्मी सिर्जना थापाको तीज गीत केल्ले मलाई सुहायो…( भिडियोसहित )
काठमाडौँ । गायिका तथा पुर्व संचारकर्मी सिर्जना थापा खनालले तीजको दोश्रो कोशेली “ केल्ले मलाई सुहायो” बजारमा ल्याएकी छन् । आफ्ना सिर्जनामा मौलिकता प्रश्तुत गर्ने क्रममा अघिल्लो वर्ष उनको तीजगीत “माइतीको आँगनी” लाई सर्बत्र रुचाइएको थियो । “पिंढी राम्रो जाँतोले, घरको शोभा ढिंकीले…………केल्ले मलाई सुहायो रातो टिकीले” उनका सिर्जनामा मौलिकता भेट्न सकिन्छ । तीजका गीतहरुमा […]
‘साइनो’को आइटम गीत रिलिज, नीताको बोल्ड नृत्य (भिडियो)
July 25, 2019 EP EDITORLeaveaComment on ‘साइनो’को आइटम गीत रिलिज, नीताको बोल्ड नृत्य (भिडियो)
काठमाण्डौ। नेपाली फिल्म ‘साइनो’को आइटम गीत रिलीज गरिएको छ । मंगलबार इन्टरनेटमा रिलीज गीतमा नायिका नीता ढुंगानाले नृत्य गरेकी छन् भने साथमा नायक राजकुमार र राजा राजेन्द्र पोखरेल पनि छन् । ‘क्या बात छ…’ बोलको गीतमा मिना निरौलाको आवाज रहेको छ भने शब्द यमन सुवेदी र र संगीत किरण भुषालको छ । यस गीतमा रामजी […]
‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ गीत रिलिज, उपासनासँग दया र कर्माको ठुम्का (भिडियो)
July 23, 2019 July 23, 2019 EP EDITORLeaveaComment on ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ गीत रिलिज, उपासनासँग दया र कर्माको ठुम्का (भिडियो)
काठमाडौ । यस वर्षको बहुप्रतिक्षीत फिल्म मध्येको एक ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ को पहिलो गीत सार्वजनिक भएको छ । यसअघि सार्वजनिक भएको टीजरलाई दर्शकले अत्याधिक रुचाएपछि निर्माण टिमले फिल्मको प्रदर्शन मिति नजिकिँदै गर्दा लोक लयको ‘दुबो फूल्यो’ बोलको गीत सोमबार सार्वजनिक गरेको हो । यो गीतले बजार तताउने छनक देखाएको छ । एसडी योगीको संगीत रहेको […]
July 21, 2019 EP EDITORLeaveaComment on छवि र शिल्पा विरुद्ध जेठी श्रीमतीको बहुविवाहको मुद्धा
काठमाडौ । निर्माता छविराज ओझा र नायिका शिल्पा पोखरेलको डिभोर्सको चर्चामा नयाँ ट्विष्ट आएको छ । निर्माता ओझाकी जेठी पत्नी हेमा ओझाले बहुबिबाहको उजुरी दिएसँगै नयाँ ट्विष्ट आएको हो । प्रहरी वृत्त गौशालामा उनले दिएको उजुरीमा छवि र शिल्पालाई विपक्षी बनाइएको छ । जाहेरीमा लेखिएको छ–‘शिल्पा पोखरेल भन्ने व्यक्तिसँग मेरा श्रीमान् छविराज ओझाको सम्बन्ध रहेको […]
‘मारुनी’ गीत: सुहायो पुष्प र साम्राज्ञीको केमेस्ट्री ? (भिडियोसहित)
July 21, 2019 EP EDITORLeaveaComment on ‘मारुनी’ गीत: सुहायो पुष्प र साम्राज्ञीको केमेस्ट्री ? (भिडियोसहित)
काठमाडौ । नारी संवेदनामाथि फिल्म बनाउन सिपालु मानिने निर्देशक नवल नेपाल निर्देशित फिल्म ‘मारुनी’ को दोस्रो गीत इन्टरनेट रिलिज भएको छ । ‘जाम्न माया जाम’ बोलको गीतले सकारात्मक प्रतिक्रिया बटुल्दै गर्दा निर्माण टिमले शुक्रबार बिहान फिल्मको रोमान्टिक नम्बर सार्वजनिक गरेको हो । गीतमा फिल्मका लिड अभिनेता पुष्प खड्का र अभिनेत्री साम्राज्ञी आरएल शाह रोमान्टिक अवतारमा […]
अभिनेत्री साम्राज्ञी प्रेमी देवाङ्कसको प्रेममा रमाउँदै…
July 21, 2019 EP EDITORLeaveaComment on अभिनेत्री साम्राज्ञी प्रेमी देवाङ्कसको प्रेममा रमाउँदै…
काठमाडौ । अहिलेकी चल्तीकी अभिनेत्री साम्राज्ञी आरएल शाहको रिल लाइफको चर्चा जति हुन्छ त्योभन्दा कम हुँदैनन् रियल लाइफको पनि । उनको रिल र रियल लाइफ दुबै हिट छ । पर्दामा बोल्ड भूमिकामा प्रस्तुत हुँदै आएकी उनलाई विवादले पनि केही वर्षयता राम्रै पछ्याइरहेको छ । कहिले गाउँले भूमिका गर्न अस्वीकार गरेको कारणले उनको आलोचना भयो त […]
‘रातो गलबन्दी’ को शीर्ष गीत सार्वजनिक (भिडियो)
July 15, 2019 EP EDITORLeaveaComment on ‘रातो गलबन्दी’ को शीर्ष गीत सार्वजनिक (भिडियो)
काठमाडौ । अभिनेत्री केकी अधिकारी र अभिनेता, लेखक तथा संगीतकार कोसिस क्षेत्रीले पहिलो पटक सहकार्य गरेको फिल्म ‘रातो गलबन्दी’ को शीर्ष गीत सार्वजनिक भएको छ । फस्टलुक पोस्टरसँगै सार्वजनिक गरिएको गीतमा राजेश पायल राई र श्रेया राईको स्वर छ । लोकराज अधिकारीले लेखेको लोक शैलीको गीतमा संगीत बिनोद खुम्बुले भरेका छन् । गोविन्द राईको कोरियोग्राफी […]
आर्यन र दीपाश्री फिचर्ड ‘हजार जुनीसम्म’ गीत रिलिज (भिडियोसहित)
July 12, 2019 EP EDITORLeaveaComment on आर्यन र दीपाश्री फिचर्ड ‘हजार जुनीसम्म’ गीत रिलिज (भिडियोसहित)
काठमाडौ । ‘नाईं नभन्नू ल’ सिरिजका निर्देशक तथा निर्माता विकासराज आचार्य निर्देशित नयाँ फिल्म ‘हजार जुनीसम्म’ को दोस्रो गीत यट्युब रिलिज भएको छ । फिल्ममा समावेश ‘एमजी रोडैमा’ बोलको गीतले सकारात्मक प्रतिक्रिया बटुल्दै गर्दा निर्माण टिमले शुक्रबार दोस्रो गीत स्वरुप ‘आज नगद भोली उधारो’ सार्वजनिक गरेको हो । गीतमा प्रलाहद तिमल्सिना र मिना निरौलाको गायन […]